Agar Vagadziri - China Agar Vatengesi & Fekitori
Fujian Global Ocean chikafu giredhi agar inoshandisa maIndonesia nemaChineseweweed semidziyo, inova chinhu chechisikigo chakabviswa mugungwa nemaitiro esainzi. Iyo agar imwe yemhando yehydrophilic colloids, isingagone kunyungudika mumvura inotonhorera asi nyore inogona kunyungudutswa mumvura yakabikwa uye zvishoma nezvishoma ichinyungudika mumvura inopisa. Fujian Global Ocean chikafu giredhi agar inogona kuumba yakatsiga gel kunyangwe mhinduro pazasi pe1%, saka ndeimwe yezvakakosha zvigadzirwa muindasitiri yezvikafu. Inogona kuve iri nani app ...
Fujian Global Ocean yekurapa giredhi agar inoshandisa Gelidium sezvinhu zvakasvibirira, zvakaburitswa nenzira dzakaomarara uye nesainzi, izvo zvakakosha kuita kurima kwehupenyu. Fujian Global Ocean yekurapa giredhi agar ine zvakanakira yakadzikira gelling tembiricha, kunaka kujekesa, hakuna kunaya, nezvimwewo, .Panguva yekurima kurima, agar seyakanaka coagulating mumiriri inogona kuendesa mvura bacteriological svikiro mune yakasimba kana hafu yakasimba bacteriological svikiro. –Bacteriological culti ...
Agar, anonzi agar-agar, nderumwe rudzi rwe polysaccharide kubva ku gracilaria uye imwe red algae. Nekuda kweiyo yakasarudzika gel inogadzira uye ine hutano hunhu, yanga ichishandiswa zvakanyanya muzvikafu, mishonga, makemikari ezuva nezuva uye ehupenyu maindasitiri. Pane hwaro hweakajairika agar, Fujian Global Ocean Biotechnology Co, .Ltd inogadzira yakaderera tembiricha pakarepo inogadzikana agar nehunyanzvi hwesainzi. Iine hunhu hwekunyungudika zvirinani mukutonhora kwakadzika uye nekukurumidza solubility kumhanya, inogona ...